ikhaya AMAZIKO E-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola baseFrance I-Paul Pogba Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
Igqityelwe ukuvuselelwa kwi Juni 29, 2020
Ibali lethu likaPaul Pogba Biology livelisa isigubungelo esipheleleyo sebali lakhe lobuNcinci, uBomi boKwangaphambili, abazali, iiNqaku zeSapho, Umfazi, abantwana, uBomi boBuntu kunye neNdlela yokuphila. Ngamazwi alula, sikunika uhlalutyo olupheleleyo lweBali lakhe loBomi, ukuqala kwiintsuku zokuqala zikaPogba ukuya kuthi ga xa wayesaziwa.
Ewe, wonke umntu uyazi malunga nekhwele lakhe elimangalisayo kunye nekhono elinamandla elinokukhuphaza kodwa bambalwa abambona u-Paul Pogba's Bio enomdla kakhulu. Ngoku ngoku ngaphandle kwee-ado, masiqale.
UPaul Pogba Ibali lobuntwana:
Paul Labile Pogba wazalwa ngomhla we-15ti ka-Matshi 1993 Lagny-Sur-Marne, eFransi. Wazalelwa ngumama wakhe waseCongo, uYo Moriba kunye noyise wakhe waseGuinea, uFassou Antoine bobabili bafudukela eFransi befuna iindawo zokudla ezikhulayo ngexesha le-1990 yokuqala.
U-Pogba wanikezelwa kwiinyanga ezilishumi emva kokuba abazali bakhe bathuthele eFransi, uphuhliso olwenzela ukuhlala kwabo ngonaphakade kwilizwe. Ngaphambi kokuzalwa kukaPaul Pogba, uYoo (unina kaPogba) wayenamaqela awelewa nguFlorentin noM Mathias (abazalwana bakaPaul Pogba) abahlala Conakry, eGuinea (ilizwe labo lase-Afrika) emva kokuba abazali babo befudukela eFransi ngaphambi kokujoyina intsapho yaseFransi kwiminyaka kamva.
Iinyaniso zikaPaul Pogba:
UPaul Pogba uvela endlwini kaTestosterone, indlu elawulwa ngabantu. UFassou Antonie Pogba (uyise kaPaul Pogba) ungumntu othobekileyo noxolo onothando. Akazibandakanyi kakhulu kwishishini lonyana wakhe (Ibhola) kunye noPaul Pogba uneminyaka engaphezu kweminyaka engaphumeleli ukuseka ubuhlobo obusondeleyo naye. Nangona kunjalo, uPogba ulwalamano oluqinileyo nonina.
Malunga noMama kaPaul Pogba:
Unina likaPaul Pogba (uYo Moriba Pogba) yingqondo yoshishino emva kwebhola lebhola lebhola lehlabathi elibiza kakhulu. Le "supermum" enekratshi (echazwe ngezantsi) yamnceda wakhulisa abafana bakhe abathathu abakhulayo baba ngabadlali bebhola.
Ulwalamano lwakhe nomntwana wakhe wokugqibela 'uPaul Pogba' luye lwaba lukhethe ngokususela ekuqaleni. Waqinisekisa ukuba wayenandipha inzuzo yokuba ngumntwana wakhe wokugqibela waza wamncoma waza wambetha. Ngokucacileyo, wamphatha ngokuhlukileyo kwabanye oonyana bakhe.
Malunga Nabazalwana bakaPaul Pogba:
Abadlali bebhola ababhinqileyo abadala (Mathias kwaye Florentin) soloko 'enomqolo wakhe'. Baqinisekisa kwakhona ukuba umntakwabo wabo (ngelo xesha) uthatha isigaba esiziziko kwiimeko ezibonakalayo kumfanekiso apha ngezantsi.
I-Biograus kaPaul Pogba- Iminyaka yokuQala ngeBhola ekhatywayo:
UPoop Pogba waqala umsebenzi wakhe webhola lebhola eneminyaka emithandathu edlala i-US Roissy-en-Brie, iqela lebhola lebhola elalikhilomitha ezimbalwa ezantsi kwidolophu yakubo.
Wachitha ixesha elisixhenxe kwiqela ngaphambi kokujoyina i-US Torcy, apho wayekhonza njengongumphathi weqela eliphantsi kwe-13.
Zange kube kudala ngaphambi kokuba ajoyine iLe Havre academy edumileyo eneminyaka eli-13 ubudala kwaye yabonisa izinto ezintle ezatsala umdla kwiiklabhu eziphambili zaseYurophu njengoko wayeqhubela phambili ngokwamaqela obudala.
Ibali likaPaul Pogba's Biology-Indlela eya kwiNdaba yeFame:
Xa uPogba wabhengeza ukuba ujoyine i-United ngo-2009, iLe Havre yakhwankqiswa kwaye yatyhola iRed Devils ngokunikezela "Kakhulu kakhulu" izibalo zemali - kunye nendlu - kubazali bakaPogba ukuphelisa isivumelwano esele sikhowule kakhulu.
Le Havre ibona uphuhliso olungabonakaliyo kunye nolwazi olungabonakaliyo kwiklabhu yelibhunga lequmrhu lokuqala ngokukhulula inkcazo ukufaka izikhalazo zabo.
"Ngexesha apho amaqela amaninzi athetha ngokuchasene ne 'ntengiso yabantwana, iManchester United ayinqikazi ukukrazula inkunzi ye-16 ubudala.'
Nangona kunjalo, iManchester United yachithwa nantoni na eyenziwa yiFIFA kunye neLe Havre bakhetha ukungabheno kodwa banyathele iindlela zokudibanisa ngokufikelela kwisivumelwano kunye namaRed Devils.
UPool Pogba wasebenzisa iminyaka eyi-2 yokugqibela yobuncinane bakhe eManchester United ukusuka kwi-2009 ukuya kwi-2011. KwakuseMelika ukuba uPogba wadibana kwaye wenza Jesse Lingard wakhe umhlobo. U-Jesse (ochazwe ngezantsi kunye nePogba) wayenomsebenzi wakhe wobutsha oseManchester United ukusuka ngonyaka we-2000-2011.
Ibali likaPaul Pogba's Biology- Rise to Fame Ibali:
U-Pogba wachitha iminyaka emithathu e-United ngaphambi kokungabikho kokudlala ngexesha lakhe lokudlala waya kuJuventus, iqela eliye lanceda ukunqoba izihloko ezine zeSerie A ezilandelelanayo, kunye neenombolo zeCoppa Italia kunye ne-Supercoppa isiTaliyane.
Amaqhawe akhe avumele ukuba abuyele eManchester United ngenkokhelo yerekhodi ye-£ 89.3 Million Pounds kwi-2016. Kwiminyaka emibini kamva, waba yinxalenye yama-23 amadoda Iqela laseFransi ophumelele 2018 World YeNdebe e Rashiya. Bonke abanye, njengoko besithi, yimbali.
UPaul Pogba Ibali lothando:
UPaul Pogba akayena mntu udibana nokuxhamla kunye namantombazana omhle, into ebonakalayo ekukhethweni kwakhe kwinqwelo elihle okanye intombi ehamba ngegama elithi Maria Salaues.
UMaria Salaues ngumzekelo onobugcisa obusekelwe eMiami, uphuhliso olwenza kube nzima kuye ukutyelela intliziyo yakhe eManchester. Nangona ulwalamano lukaPogba kunye ne-23 elineminyaka eli-2000 yaseBolivia lugcinwe kwiprofayili ephantsi, i-duo yenza iindibano eziphambili eziphakamisa izinga abaye bafikelela kulo mdlalo wabo wothando.
Ukuphuma kokuqala komphakathi kwixesha labo lokuthandana kwakukho kwi-2017 xa babonwa kuqala. Ngokukhawuleza kuJuni 2018 uMaria Salaues ubonakala egqoke into ebonakala njengendandatho yokuzibandakanya njengoko wahlala esikufutshane noMama kaPogba kwiMidlalo yaseMoscow yaseLuzniki ngexesha lomdlalo weqela leNdebe yeHlabathi yeNdebe.
I-Paul Pogba Roots Family-Igazi lamandla:
Isikhundla esikhulu sikaPoorg Pogba sisongelo kuyo yonke i-footballer. Ubuntu bakhe ngokubhekiselele kubaphandi banengcambu yenkwenkwezi elandelwa kwiimpawu zabadlali bamnyama abamnyama njengoMerika Kobe Bryant ovela egazini lamandla. U-Paul Pogba onamandla, onjengobugcisa obukhulu kunye nobukhulu beetalente zakhe umenze aphume phakathi kweontanga.
Ukuzibophezela kwakhe ekufezekiseni ubuchule bakhe bengazi mida kwaye akusikho uphuhliso lwangoku. Uqeshe umzimba wakhe we-physiotherapist kunye nomhlengikazi ukususela ekushiya iFransi eneminyaka eyi-16. Umzimba wakhe we-physiotherapist kunye ne-dietician ukuqinisekisa ukuba uyayicinga ngokufanelekileyo emva kwemidlalo kwaye igcina imiqathango eqinileyo kwixesha elidlulileyo.
UPaul Pogba oBomi boBomi bakhe obuKwenza ngaphandle kwePitch:
UPool Pogba wenza lo qeqesho olunzima ukuphucula amandla akhe okudotshwa kwexesha elide kwaye amncede ekuphuculeni ubuchule bakhe bokuphila kunye nokuphila. Ikhono lakhe lokukhangela ibhola libonisa ukuba ukulungele ukujongana nayiphi na ingozi endleleni yakhe.
"Nabani na ozama ukundikhathaza, mhlawumbi uya kuba ngothusayo"
I-Paul Pogba Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts-Umdaniso weMdaniso
U-Pogba uye wabamkela abalandeli ngamanyathelo omdaniso amaninzi awasebenzisayo kwimibhiyozo nanini na xa ebona. UPaul Pogba ubonakala ngaphantsi kokuqhuba umdaniso omtsha kunye nomlingani wakhe Jesse Lingard.
Ingoma edumbileyo yedoo yahlabelelwa nguYeye waba ngumculi waseNigeria owazalwa, Wizkid.
Ibali likaPaul Pogba leBiology-Ibali loMsebenzi weHlabathi
U-Pogba akazange aqhube kwiqela eliphezulu laseFransi ngaphandle. Waqala ukubonakala kwakhe kweLes Bleus kwizinga le-U16 kwiqela le-U20 'Espoirs'.
Ixesha lakhe eligqibeleleyo lafika kwi-2013 xa wayekhokela eFransi ukuzukisa kwiNdebe yeHlabathi ye-U20. Umdlali wasecaleni, waguqula isohlwayo ekudutshulweni kokugqibela malunga ne-Uruguay waza wabizwa ngokuba ngumdlali weentambo.
UPaul Pogba wamphumelela umklomelo we-Addidas Golden Ball ngexesha lokugqibela kweNdebe yeHlabathi yeFIFA i-20 phakathi kweFransi ne-Uruguay kwi-Ali Sami Yen Arena ngoJulayi 13, 2013, e-Istanbul, eTurkey.
Imisebenzi ka-Paul Pogba yeBhola yeBhola ekhatywayo:
Ngaba ubusazi?… Abantakwabo abadala baseFransi ababalaseleyo Florentin Pogba kwaye Mathias Pogba bobabini bebhola kunye namawele afanayo.
Abazalwana abadala bakaPauba (abababini amawele) - uFlorentin Pogba (ngasekhohlo) no-Mathias Pogba (ngasekunene)
Bobabili bazalwa eGuinea. UFlorentin Pogba (ochazwe ngumlawuli weGuinea wamanje) njengokuba ngexesha lokubhala.
Malunga nabazali bakaPaul Pogba:
Njengoko kuchaziwe ngaphambili, uyise kaPogba ungumGineine ngoxa unina ungumvela eCongo. Bobabini banxulumano oluhle kunye nendodana yabo. Nangona kunjalo, umama kaPaul Pogba ube kunye naye kwiinyawo zonke zokuphumelela kwakhe. Utata uziziva ekhululekile ngokugcina iphrofayili ephantsi kwaye akabandakanyi kwimisebenzi yoonyana bakhe.
Umama kaPopba kaMama noTata
Ngesinye isikhathi, iManchester United yanikela i-£ 85,000 nganye kubazali bobabini ngo-oo owenyana wabo (u-Paul Pogba) ukuba ahlale nabo kwi-2009. Qikelela ukuba?. Bobabini bamkela imali. Oku kwambona i-spell yokuqala yonyana wakhe eManchester United.
I-Biograus kaPaul Pogba- Indlela uMama wakhe aziphembelela ngayo iiTransfer zakhe:
Udlalwa ngokukhawuleza 'I-Supermum kunye neyorhwebo yebhola yonxweme eyayijika unyana wayo uPool Pogba kwi-fortune yezigidi zeedola ngaphandle kwexesha.
UNksz Yeo Moriba uvakaliswe ukuba ngummeli wonyana wakhe, umphathi kunye nomcebisi. Kananjalo udlala indima efana namanye amadodana akhe angamawele (u-Florentin no-Mathias) bobabini baseGuinea.
Wema khona kuye nangona uxinzelelo luka-Alex Ferguson luyamkholisa ukuba avumele ukuba unyana wakhe ahlale kwiqela. Xa ebuzwa malunga nokuhlangana kwakhe noFerguson, u-Yeo Moriba uhleka nje xa ekhumbula enye yezinto ezithandwayo kunye no-Ex-Man U boss owayesabhekene naye kunye nexesha elizayo yonyana wakhe uPool Pogba.
"Xa uFerguson efika endlwini yam..Ndiqiniseke ukuba ushiyekile. Ndandisoloko ndamxelela, unyana wam uPawulos akayi kuphinda atyikitye. Ngenxa yolu hlobo, uFerguson wamgxotha, akazange amdlale, umntwana wam uPaul wayeyedwa. Wada wadanduluka eofisini likaFerguson ngendlela ayiphatha ngayoehleliwe. UPool Pogba wayecaphukisa loo nto UPaul Scholes wabuya umhlala-phantsi wenyanga-ntandathu ngoJanuwari 2012 ukuze ahlangule indawo yaseMelika eyayikuyo. Yiyo kuphela i-18 ngexesha kwaye kunye neembonakalo ezithatha indawo ebonakalayo egameni lakhe kwi-League Cup, uPogba wayeziva ukuba kufuneka anikwe ithuba. Oku kwenziwa unyana wam unqwenela ukushiya iqela ".
Nangona zonke iingxaki zethu, ummangaliso usenzeke. Indodana yam yaba yinto esheshayo kwiJuventus. Namhlanje uya kufuneka uthi ndiyazi kakuhle ngebhola, ndibe ngumama oqhelekileyo kodwa akukho mntu angangikhohlisi kule shishini, "
UNksz Yeo Moriba Pogba uphika ukuba nguye oyena nxaxheba ebalulekileyo njengegosa lonyana wakhe. Ngokutsho kwakhe;
"Ndicelwa kuphela ngcebiso, yikho konke. UPawulos uyamhlonela, uphulaphula yonke into endiyithethayo kuye. "
I-Biografia kaPaul Pogba- uFeud kunye no-Alex Ferguson
Ngexesha lakhe elixakekayo eManchester United, uPaul Pogba wayeyaziwa ngamazwi alamba;
'Ndikhetha ukwenza i-DIE kunokuba ungadlala ibhola'.
Akesabi. Ukhululeka xa ehluthwa ithuba elifanelwe. Wayengomnye wabadlali abambalwa abesabayo ababenemibala yokuhamba ukuze baqeqeshe uSir Alex Ferguson ukuba athi;
'Nkosi, ndicinga ukuba ndiwanele, Ndidlale, kwaye ndiya kukubonisa ukuba ndikulungele okanye' '.
Kwividiyo engezantsi, uPaul Pogba uxeka uManchester United "Ukungahloneli", ebiza ukuba wenziwe ukuqeqeshwa yodwa ngexesha lesivumelwano sakhe sokubambisana esaphambi kokufudukela kwakhe kwiJuventus,endalakazikazi.
Inkolo kaPaul Pogba:
Indawo yamandla aseFrance ngumSilamsi wokholo. Uhlala ebonwa ethandaza phambi komdlalo.
Uthando lukaPaul Pogba lwe-Islam.
Nangona ube ngumdlali webhola, uPool Pogba unesithethe esiqinileyo samaSilamsi. Ulandela kwaye ahloniphe imveli yaseArabhu.
Isidlaliso sikaPaul Pogba- Isizathu sokuba aphathe 'i-Octopus':
Kwabaninzi ababukeleyo iPogba yonke indlela, omnye uya kubona ibini elongezelelweyo lemilenze emilenze ecocekileyo kunye namandla asemvelo awasebenzisayo nanamhlanje ekuhlaseleni nasekukhuseleni.
Iinyawo zakhe ze-6.3 ezinqabile kwaye zixhamle imilenze ziyakuthandwa ngabalandeli abaninzi bebhola. Yingakho amaqabane amabi athiwa igama ("UPaul the Octopus"). Eli gama lavela ngenxa yemilenze yakhe ende kwaye iguquguqukayo. Abathandi bakholelwa ukuba imilenze yakhe ifana neentente ze-an i-okthophasi xa ejongana, egijima, ehamba kwaye ahlasele iiflethi ezide.
Abazalwana abadala bamaPogba bakhetha ukumbiza ngokuthi 'PogboomNdiyabulela kwimigudu yakhe ende kwiinjongo. Le yithente ebhalwe kwiibhuthi.
Imvelaphi yesidlaliso sikaPaul Pogba:
Igama elithi 'UPaul we-Octopus'yavela kwi-Octopus ethandwayo eyayisetyenziselwa ukuqikelela imidlalo ngexesha leNdebe Yehlabathi ye-2010. UPawulos (ngoku iLate late and Rumored to have been killed by Global Sports Betting Billionaire Abanikazi) baxela ngempumelelo imidlalo yebhola yebhola yebhola yebhola yehlabathi. Kuba uPawulos, ukuxhomekeka ebhokisini kuthetha ukuba ilizwe liya kuphumelela umdlalo olandelayo.
I-Biografi kaPaul Pogba- iZikhundla zoBomi
Kufanelwe ukutsho ukuba umdlali onjengoPaul Pogba ubonisa i-recipe enkulu yebhola lebhola lehlabathi. akukhona nje ukunyuka kweenwele kunye nokugqoka ukugqoka ingqiqo, kodwa indlela yakhe yokudlala imenza abe ngumdla kwi-FIFA-Vine generation generation. Fumana ngezantsi, i-rankings kaPobo Pogba.
Ndiyabonga ngokufunda uPaul Pogba Ubuntwana Ibali kunye neengxelo ezingezizo. at LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ubona into engabonakali kakuhle kweli nqaku, nceda ubeke izimvo zakho Qhagamshelana nathi!.
I-Marcus Thuram Ibali lokuKhula kobuntwana kunye ne-Untold Biography Facts
IJean-Philippe Mateta yokuKhula kweBantwana ngeNqanaba leNgcaciso yeBantwana yeNqaku
I-Dayot Upamecano Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology leNobold
I-Iraima Konate Ibali lobuNcinci beNqaku leNqaku leNgcaciso yeBantwana kunye ne-Untold Biography
I-Boubakary Soumare Ibuntwaneni Ibali leNqaku leNgcaciso ye-Untold Biography
I-Lys Mousset Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology leNqaku
Izibakala zeNeal Maupay zaBantwana kunye neNqaku leMbiniso yeNeo
Zonke i-Allan Saint-Maximin Ibali lokuKhula kobuntwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Moussa Dembele Ibali leBantwana kunye neNdawo engabonakaliyo
I-Presnel Kimpembe Yabantwana Ibali Plus Untold Biography Facts
Raphael Varane Ibali leBantwana kunye neNgxelo ye-Untold Biography Facts
U-Abdoulaye Doucoure Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
U-Antoine Griezmann Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Clement Lenglet Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biograph ye-Cold